Mootummaa Itoophiyaa: Buufatni doonii Asab hojii eegaluuf - BBC News Afaan Oromoo
Mootummaa Itoophiyaa: Buufatni doonii Asab hojii eegaluuf
17 Adooleessa 2018
Madda suuraa, GC
Itoophiya fi Eertiraan hariiroo diinagdee isaanii cimsuuf walii galuu isaanii hordofee, buufatni doonii Asab, qarqara galaana Eertiraatti argamu Itoophiyaaf tajaajila kennuu atattamaan akka eegaluuf hojjetamaa jira jedhe ibsi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa.
Gareen Ministeera Geejibaa, Abbaa Taayitaa Tajaajila Geejiba Galaanarraa Itoophiyaa( maritime) fi Dhaabbatni Tajaajila Loojistikii Geejiba Galaanarraa Itoophiyaa of keessatti hammate hundaa'ee hojii eegaluus dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Mallasaa Alam hara'a ibsa miidiyaaleef kennaniin ibsan.
Daandiin konkolaataa gara Asabitti geessus suphamaa akka jiru ibsameera.
Gama mootummaa Eertiraatiinis hojiin walfakkaatu hojjetamaa akka jiru obbo Mallase Alam himaniiru.
waliigaltee biyyoonni lameen irratti waliigalan irratti hundaa'uun daandiin xayyaaraa Itoophiyaa waggoota 20 ol booda bor yeroo jalqabaaf imaltoota fe'atee gara Asmaratti kan balali'uu ta'uus ibsaniiru.
Daandiin xayyaaraa Itoophiyaa torbee guutuu akka imalus himan. Sababa kanaaniis Eertiraan buufataalee xayyaaraa 115 waliin wal qunnamtii.
Akkuma embaasiin Eertiraa Itoophiyaatti baname, Eertiraattis embaasii Itoophiyaa banuuf hojiiin hojjetamaa jira jedhameera.
Walitti dhufeenya uummatoota biyyoota lameenii cimsuufis hojiileen hojjetamaa jiraachuu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun eereera.
Jilli MM Itoophiyaa Dr Abiy Asmaraatti simannaan addaa taasifameeraaf
8 Adooleessa 2018
KALLATTIIN Addunyaarratti lakkoofsi namoota Covid-19n qabaman mil.18 caalee
‘Abbaa warraa haadha warraasaa reebu arguun waan baratame ture’
Duteerte: 'Qoosaa hin jiru, maaskii keessan gaaziin qulqulleessaa'
'Mootummaan dhaabbii biqiltuutiin siyaasa addaa hojjetu hin qabu'
Namichi kana dura albuudaan halkan tokkotti badhaadhe ammas kan Dolaara mil. 2 argate
Ajjeechaa Haacaaluu booda maaltu ta'e?
Xiyyarri waraanaa Israa’el buufata waraanaa Siiriyaa haleele
Beenishaangul Gumuz, Gubaa keessatti namoonni ugguraman
Booyiing 737 Max deebiyee balali'uutti dhiyaachaa jira